Home Wararka Rooble oo kala diray Guddoonkii SEIT ee Gobolada Waqooyi
Rooble oo kala diray Guddoonkii SEIT ee Gobolada Waqooyi
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa goordhoweyd shaaciyey in laga laabtay guddoonkii ay soo doorteen labada garab ee guddiga doorashada Somaliland, kadib kulan uu maanta la qaatay labada garab ee guddigaas.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa lagu sheegay in xafiisku uu soo gudbin doono xiliga iyo goobta lagu qabanayo doorashada guddoonka guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Somaliland oo maalmihii u dambeeyay u kala jabay labo garab.
“Ra’iisul Wasaaraha ayaa xusay in laga noqday doorashadii ay dhowaan dhinacyada guddigu ku doorteen labada hoggaan, isla markaana uu Xafiiska Ra’iisul Wasaaruhu soo gudbin doono xiliga iyo goobta lagu qabanayo doorashada guddoonka guddiyada,” ayaa lagu yiri qoraalka.
“Waxa uu sheegay in xubnaha guddiga laga doonayo in ay ka madax banaanaadaan siyaasadda iyo aragtida dhinacyada, ayna si siman ugu adeegaan dhammaan muwaadiniinta u tartamaya kuraasta ay doorashadooda hagayaan.”
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa tilmaamay in mas’uuliyadda koowaad ee hufnaanta iyo la xisaabtanka guddiyada doorashooyinka ay isaga saaran tahay, islamarkaana xubnaha guddigu ay ka fogaadaan wax walba oo baal marsan habraaca doorashooyinka ee lagu heshiiyey.
“Sida ku qoran wareegtadii la idinku soo magacaabay, waxaad ka madax bannaan tihiin cid kasta oo siyaasad ku jirta, sida uu qabo habraaca doorashada, waxaa la idin kaga fadhiyaa waajibaadkiina inaad u gudataan si daacad ah oo waafaqsan hufnaanta doorashada, wixii caqabad ah ee idinla soo gud-boonaadana waxaad ula soo laabanaysaan Ra’iisul Wasaaraha oo ah hoggaamiyaha doorashada.”
Arrintaan ayaa imaneysa xili uu dhawaan Ra’iisul Wasaaraha kulamo wada-jir ah la qaatay hogaamiyeyaasha labada garab ee u kala jabeen guddiga doorashada kuraasta Somaliland, kuwaasi oo fashil kusoo dhamaaday, kadib markii uu Cabdi Xaashi ku gacan seyray dalab uu kusoo jeediyay Rooble in uu si toos ah ula wareego hogaanka doorashada gobolada Waqooyi.
Previous articleFaragelin ka timid Agaasimaha NISA oo dhalisay inuu kala qeybsamo Guddigii Doorashada Hirshabeelle
Next article[XOG] Galka Baarista “Ciidanka lagu tababarayey Eritrea oo dalka ku soo wajahan”
Puntland oo ku eedeysay dowladda Federaalka in ay hor-istaagtay fulinta heshiiska...